ပါတီနှင့် နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတူတကွရပ်တည်ခဲ့သော CPC ပါတီဝင်များအား ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်အပ်နှင်း - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအသုတ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
တရုတ်-အာဆီယံ မီဒီယာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖိုရမ်ကျင်းပ - ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းအရာများကို ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ပြပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ကို အတူတကွ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မည်ဟုဆို
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ပါတီဦးဆောင်မှုခံယူခဲ့သည့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ဂုဏ်ပြုပေးအပ်သော ဆုတံဆိပ်ပြားကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေ ၂၆ ရက် ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပါတီဦးဆောင်မှုဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကြာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တောက်လျှောက်ရပ်တည်လာခဲ့သူများအား ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်ပေးအပ်ချီးမြင့်ပွဲကို ယနေ့ ဇွန် ၂ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁ ရက်အထိ နှစ်ပေါင်း ၅၀ တိတိ သို့မဟုတ် ယင်းထက် ကာလကျော်လွန်၍ ပါတီဝင်အဖြစ် တည်ရှိကာ ယင်းတို့၏ ပါတီတာဝန်များကို မြဲမြံစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် CPC အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆုတံဆိပ်အင်းနှင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို ဇူလိုင် ၁ ရက်အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း CPC ပါတီဝင်ပေါင်း ၇.၁ သန်းကျော် လက်ခံရရှိသွားဖွယ်ရှိကြောင်း တရားဝင်းအချက်အလက်များအရ သိရသည်။
၎င်းဆုတံဆိပ်ပြားသည် အချင်း ၅၀ မီလီမီတာရှိပြီး ကြေးနီး-ဇင့် ပေါင်းစပ်သတ္တုဖြင့် ဖန်တီးထားကာ အနီရောင် နှင့် ရွှေရောင်အဆင်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ရှေ့လာမည့် နှစ်များတွင် ဆုတံဆိပ်အပ်နှင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို အမြဲလိုလို တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမွေးနေ့အခါသမယဖြစ်သော ဇူလိုင် ၁ ရက် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆက်လက် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုနှစ်သည်CPC ပါတီ တည်ထောင်သည့် နှစ်တစ်ရာပြည့် အခါသမယဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, June2(Xinhua) — Events were launched across China on Wednesday to award commemorative medals to Communist Party of China (CPC) members bearing five decades of party membership.
Eligible recipients are CPC members who would have been party members for 50 full years or longer as of July 1, 2021, and have consistently performed well in their roles.
The awarding of honors, set to last until July 1, will see more than 7.1 million CPC members across the country receive the medals, according to officials.
The medals measuring 50 mm in diameter are made of copper-zinc alloy, and come in hues of red and gold.
In the future, the memorial medal awarding is slated to take place onceayear, usually around July 1, the birthday of the CPC.The CPC marks its centenary this year.
Photo taken on May 26, 2021, shows the commemorative medal awarded to Communist Party of China members after five decades of Party membership. (Xinhua/Li Xiang)
ယူကရိန်းနိုင်ငံက လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်